» मकवानपुरमा सबै बजार खुल्ने, होटल चल्ने र सबै गाडी चलेपछी निषेधाज्ञा केका लागि ?
मकवानपुरमा सबै बजार खुल्ने, होटल चल्ने र सबै गाडी चलेपछी निषेधाज्ञा केका लागि ?
७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०९:२४
हेटौंडा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मकवानपुरमा आगामी साउन १४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको आदेशमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो । यसअघि देखिनै मकवानपुरको हेटौंडा र अरु नौ वटै स्थानीय तहका बजार, होटलहरु खुलीसकेका छन् । बजार क्षेत्रमा भीड निकै बढेको छ ।
सबै खालका सवारीका साधन चलिसकेका छन् । तर, फेरी निषेधाज्ञा किन जारी भएको भनेर नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् । बितेको असार महिनाको अन्तिम साता देखि प्रशासनले लागू गरेको निषेधाज्ञाको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुको सट्ट थप गर्ने परिपाटी भने रोकिएको छैन ।
प्रशासनले निषेधाज्ञाको अपव्याख्या गरेको यसका जानकारहरु वताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेद्वारा जारी निषेधाज्ञामा समय तोकिए पनि त्यसको पवनि कार्यान्यन भएको छैन । खुल्न नमिल्ने र गर्न नमिल्ने भनिएका पाटी प्यालेस पनि चल्न थालेका छन् । होटलको त कुरै नगरौ पहिले देखिनै चल्दै आएका छन् ।
प्रशासनले आखा चिम्लीएर वसेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कही पनि पालना भएको छैन । सार्वजनिक कार्यक्रम भइरहेका छन् । तर, निषेधाज्ञा किन जारी भइरहन्छ भन्ने विषयमा नागरिकले प्रस्न गर्न थालेका हुन् । । गत बैशाख २१ गतेबाट जारी निषेधज्ञालाई श्रावण १४ गतेसम्म थप गरिएको हो । बुधबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति मकवानपुरको बैठकले जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा थप एक हप्ता थप्ने निर्णय गरेको हो । तर, हेटौंडा बजारमा भीड भने कायमै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निषेधाज्ञा गर्ने तर, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको छ ।
बैठकले साउन ७ गते राति १२ बजेदेखि साउन १४ गते बिहिबार राति बजेसम्म गरी थप एक हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
निषेधज्ञामा यस अघिको निर्णयलाई यथावत राखिएको छ । जस अनुसार बिहान ४ बजेबाट ११ बजेसम्म खाद्यन्न ब्यवसाय तथा ११ बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म अन्य ब्यवसायहरु सञ्चालन हुनेछन् । संघिय सरकारले बन्द गरेका शैक्षिक सस्था सहितका ब्यवसाय भने बन्द नै रहने छ ।